WARBIXIN: Tababare Lampard Oo Qorshihii Uu Chelsea Ku Dagaal Gelin Lahaa Dajiyay, SHAN Ciyaartoy Oo Ay Seeftiisu Qaadayso & Laba Uu Doonayo - Gool24.Net
WARBIXIN: Tababare Lampard Oo Qorshihii Uu Chelsea Ku Dagaal Gelin Lahaa Dajiyay, SHAN Ciyaartoy Oo Ay Seeftiisu Qaadayso & Laba Uu Doonayo
Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa u muuqda mid dejiyay qorshaha uu ku dagaal gelinayo kooxdiisa xilli ciyaareedka dambe isaga oo doortay shan ciyaartoy oo uu kooxda ka dirayo iyo laba bar-tilmaameed u ah.
Aan ku bilawnee Lampard ayaa go’aamiyay inuusan kooxda ka fasixin bur-buriye N’Golo Kante oo ay Real Madrid doonayso iyo waliba kabtan ku xigeenka kooxdiisa ee Jorginho oo bar-tilmaameed u ah Juventus.
Lampard ayaan awoodin inuu xagaagii 2019 suuqa ciyaartoy kala soo saxeexdo maadaama oo uu ganaax suuqa ka saarnaa Blues balse da’yar ay kamid yihiin Tammy Abraham iyo Mason Mount ayaa si weyn usoo caawiyay iyaga oo booska afraad keenay.
Lampard ayaa hadda diyaar u ah inuu keensado ciyaartoyda bar-tilmaameedka u ah ee waaweyn si uu usoo yareeyo farqiga u dhaxeeya kooxdiisa iyo kooxaha Liverpool iyo Chelsea iyadoo garabka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho iyo daafaca bidix ee Leicester City ee Ben Chilwell ay yihiin labada ciyaaryahan ee uu doonayo.
Chelsea ayaa xilli horeba sii haysata lacag kaash ah oo ah tii ay ku iibisay Eden Hazard suuqii hore, intaas waxa dheer inay 48 Milyan oo pound heli doonaan 1-da July marka heshiiska amaahda ah ee Alvaro Morata ee Atletico Madrid uu rasmi noqdo.
Si kastaba, Blues ayaa bishii February heshiis 36 Milyan oo Pound ah kula soo wareegtay garabka Ajax ee Hakim Ziyech, Lampard ayaa wali u baahan inuu lacag cusub sameeyo sidoo kalena kala yareeyo safkiisa kooxda.
Shanta ciyaartoy ee uu Bridge ka diri karo ayay ugu horreeyaan labada daafac bidix ee Marcos Alonso iyo Emerson Palmieri oo aan loo baahan doonin kaddib imaatinka Chilwell iyadoo sidoo kale da’yarka Ian Maatsen kooxda waaweyn loosoo dalaci doono.
Bur-buriye Tiemoue Bakayoko ayay suurogal tahay in laga iibiso Paris Saint-Germain marka uu amaahda AS Monaco kasoo noqdo si lamid ah Davide Zapacosta ayaa la filayaa inuu heshiiskiisa amaahda ah ee AS Roma joogto ka dhigo.
Ugu dambayn, weeraryahan Mitchy Batshuayi ayaa la filayaa in la iibin doono kaddib markii uu ku fashilmay inuu saddex tababare oo kala duwan saamayn ku hoos yeesho.